ပုသိမ်မြို့မှ ဦးသိန်းရွှေအကြောင်း – Manawmaya
By မနောမယ / June 4, 2018
“ဦးသိန်းရွှေ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်ပြီ။ ဘုရားထီးတင်ဖူးလား?”
“တင်ဖူးတာပေါ့။ သာပေါင်း-တောင်ညိုက ဘုရားထီးတင်တာ ငါပါတာပေါ့”
“အေး ငါက သူများနဲ့မတူဘူး။ လူထူး လူဆန်းပဲ။ ရုက္ခစိုးတောင် ထွက်ပြေးတာ။ သိတယ် မဟုတ်လား။? တစ်ခါတလေ ပွဲကြီးပွဲကောင်းဆိုရင် ဖောက်ဖောက်လာတတ်တယ်။ ဆရာကြီးတွေက ရှင်းပေးရတာများတော့ ငါ့ကို မလာစေချင်ဘူး”
“ဪ … ဒီလိုလည်း ရှိကြတာလား”
“တစ်ခါက ငါတို့ရဲ့ဆရာ ဆရာတင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဆရာစုတို့ တပည့် လိမ္မာတွေနဲ့ တောင် ညိုက ဘုရား ထီးတင်ဖို့ လုပ်ကြတယ်။ တောင်ညိုက သာပေါင်းမြို့မှာ ရှိတာ။ ပုသိမ်က စက်လှေနဲ့ လိုင်း သင်္ဘောနဲ့ တစ်နေကုန် သွားရတာ”
“ဆရာအဖွဲ့တွေ ငါမသိအောင် မနက်ဖြန် စက်လှေနဲ့ ထီးပင့်မှာ။ သာပေါင်းတောင်ညိုက ထီး တင်ပွဲ ငါ့ကိုထားခဲ့မှာ”
“ဟုတ်တယ်။ ငါလည်း မနက်စောစော လမ်းလျှောက်တော့ စိတ်က သီတာဦး သင်္ဘောဆိပ် ကို သွားချင်နေတယ်။ သီတာဦးသင်္ဘောဆိပ်ကနေ ဆက်သွားရင် သာပေါင်းသွားမယ့် လိုင်းသင်္ဘော အသေးရှိတယ်”
“ငါ့စိတ်က ဒီနားလေးကို သွားချင်နေတာ။ ကဲ …သွားကွာဆိုပြီး စိတ်ထင်ရာလျှောက်လိုက် တာ။ သာပေါင်း သင်္ဘောနား ရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့”
“ဆရာ့ကိုယ်စောင့်နတ်က သတိပေးတာ ဖြစ်မယ်”
“ဟုတ်တယ်။ ငါက ရူးပေမယ့် ဘုန်းက မရူဘူး။ ငါ့အစောင့်က နှိုးဆော်တာ။ သင်္ဘော ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ ထီးကို မြင်ရတာ။ ဘုရားက ထီးကြီးပဲ”
“ထူးတော့ထူးတယ်။ ထီးတော့တွေ့ပြီဆိုပြီး ငါ အပြင်ကို အကဲခတ်လိုက်တော့ ဆရာတင်တို့အဖွဲ့ သင်္ဘောဆီကို လာနေတာတွေ့လိုက်တယ်”
“ငါလည်း ဘာရမလဲ။ ဒင်းတို့ကို ပညာပေး မယ်ဆိုပြီး သင်္ဘောပေါ်တက်ပြီး အိမ်သာထဲ ဝင် ပုန်းနေလိုက်တယ်”
“ကောင်းခန်း ရောက်နေပြီ။ ဆက်ပါဦး”
“ဒီလိုနဲ့ ထီးတင်မယ့် ဆရာအဖွဲ့လည်း စုံ ရော။ သူတို့ပြောတဲ့စကားသံကို ငါကြားနေရတာ ပေါ့။ ခရီးသည်တွေ စုံလို့ သင်္ဘောကြီးလည်း ကမ်း က ခွာရော။ ဆရာ့တပည့်တွေ ဝမ်းသာနေကြတာ။ ဒီတစ်ခါ သိန်းရွှေ မပါတော့ဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် သိန်းရွှေတစ်ယောက် ထီးတင်ပွဲမလိုက်ရလို့ ငိုနေမှာ ပဲ။ သနားပါတယ် ကိုသိန်းရွှေရေလို့ တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ပြောနေကြတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ငါလည်း အိမ်သာထဲက ထွက်လာပြီး ‘ငါ လည်းပါတယ်။ ချန်မထားနဲ့။ ထီးတင်ပွဲ လိုက်ခဲ့မယ်’ဆိုပြီး ထွက်လာရော”
“ဟာ ဒုက္ခပဲ။ သိန်းရွှေကြီးက ဒီရောက်နေတယ်ဆိုပြီး ပါးစပ်အဟောင် သားနဲ့ အံ့ဩနေကြတာပေါ့။ သူတို့ဆရာ ကြီးကို သွားပြောကြတာပေါ့။ ဆရာကြီးက မေး တယ်။ မင်းကို ဘယ်သူက ပြောတာလဲတဲ့။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။ ဒီနေ့ မနက်ကိုယ်စောင့်နတ်ကနှိုးဆော်လို့ ရောက် လာတာပါလို့ ပြောလိုက်တာ”
“မင်း ငါ့စကားကို နားထောင်။ တောင် ညိုဆိုတာ တောင်ပိုင်ကြီးက ဆိုးတယ်။ ပေါက်ကရ လုပ်ရင် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ ထီးတင်ပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်အောင်တင်ချင်တယ်။ မဖောက်ပါနဲ့လို့ ဆုံးမတယ်”
“ဦးသိန်းရွှေကလည်း ဖောက်ဖောက်နေ တတ်တာလား?”
“ငါက အမြဲတမ်းကြီးတော့ ဖောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ စိတ်ထင်ရာ လုပ်တတ် တော့ မှန်တာ ရှိသလို မှားတဲ့အခါကျတော့ ဖောက် တာလို့ ပြောကြတာပေါ့ကွာ”
“တောင်ညိုမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ထီး တင်ခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ငါ့ကို ကွက်ပြီးထားခဲ့တာမှ ငါလည်း ပါဖြစ်အောင် ပါခဲ့တာ။ ငါ့ဘဝရဲ့ မှတ် တမ်းလေး တစ်ခုပေါ့ကွာ”
“ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထားပါ့မယ်။ တစ်ချိန်ကျရင်တော့ အသုံးတည့်မှာပါ”
“တောင်ညိုရောက်တော့ ဦးသိန်းရွှေကြီး ဖောက်သေးသလား။? တခြား ထူးဆန်းတာတွေ ဖြစ်သေးလား”
“အေး ထူးဆန်းတာတစ်ခု ဖြစ်သေးတယ် ကွ။ ငါ့ကို ဆရာက အနီးကပ် ကြီးကြပ်ထားတော့ သိပ်ဖောက်လို့ မရဘူး။ ထီးတင်ပွဲတော့ အောင် အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဆရာလည်း စိတ် လျှော့လိုက်ပြီး ငါ့ကို လွှတ်ထားတယ်ကွာ”
“ဆရာ့တပည့်ထဲမှာ စိုးသိန်းဆိုတဲ့ ရခိုင် တစ်ယောက် ပါတယ်ကွ။ သူက ရိုးရိုးအအကြီးပါပဲ။ ငါ့ကို ထီးတင်ပွဲ မလာစေ့ချင်တာ သူက အကဲဆုံးပဲ။ သင်္ဘောပေါ်မှာ ငါ မပါလို့ ပျော်နေတာလည်း ဒီ ကောင့်အသံက အကျယ်ဆုံးဘဲ။ ငါ သူ့ကို ပြန်စချင် နောက်ချင်တာတယ်”
“ဟုတ်တယ်။ ငါ့စိတ်တွေက ဖောက်လာ တယ် ဆိုပါတော့ကွာ။ ဆရာက ဆရာကတော်နဲ့ စကားပြောနေတယ်။ ငါတို့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ စုမိရာက ငါတို့နှစ်ယောက် ထအော်တော့တာပဲ”
“တစ်ယောက်က တိုင်ပေးတယ်။ ငါက လိုက်ဆိုတာ။ အတိုင်အဖောက် လုပ်ကြတာပေါ့”
“တောင်ညိုကို ဘယ်သူစောင့်မလဲ? လို့ တိုင်တာ ငါက ‘တောင်ညိုကို စိုးသိမ်းစောင့်မယ်’လို့ ဖောက်လိုက်တယ်။ သုံးကြိမ်လည်း အော်ပြီးတော့ ဆရာလည်း ရောက်လာတာပေါ့”
“ဆရာက ဆူလိုက်တာ။ ငါ သေသေချာချာ ပြောထားရက်နဲ့ မဖောက်ပါနဲ့ဆို၊ ဘာလို့ ပေါက်ကရ အောက်ရတာလဲလို့ ဆုံးမတာပေါ့။ စိုးသိန်း ရခိုင် လည်း ငိုပြီး ဆရာ့ကို တိုင်ပြောတာပေါ့”
“စိုးသိန်း ငါရှိတယ်။ မင်းဘာမှ မဖြစ်စေ ရဘူးဆိုပြီး ဆေးတွေ ဘာတွေ တိုက်လိုက်တယ်။ စိုးသိန်း ရခိုင်လည်း ဘဝင်ကျသွားတယ်”
“ငါတို့အဖွဲ့ ပုသိမ်ကို ပြန်လာကြတယ်။ ရခိုင်စိုးသိန်းလည်း ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲမသိဘူး။ သာပေါင်းကို သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ ပြန်သွားတယ်။ သာ ပေါင်းမှာ သစ်ကိစ္စအလုပ်လုပ်ရင်း တောင်ညိုနားက မြေကွက်တွေ ဝယ်ပြီး ယာလုပ်နေတာ ငါးနှစ် လောက်ကြာတယ်”
“အော် ဒီလိုတောင် ဖြစ်သွားတာပေါ့”
“ငါလည်း စိုးသိမ်းကို သနားလို့ တောင်ညို အထိ သွားခေါ်ရတယ်။ သူ့ယာခင်းတွေရောင်းပြီး ပုသိမ်ကို မနည်းပြန်ခေါ်လာရတာ။ ဝစီဗေဒ ပြော တိုင်းရှတယ်ဆိုတာ ငါကောင်းကောင်းသိသွားပြီ”
ဤသို့ဖြင့် ပုသိမ်မြို့တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့စဉ်က ခင်မင်လေးစားခဲ့ရသော ဦးသိန်းရွှေ ကြီး၏ ပြောစကားများကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုရ ပါကြောင်း …။ ။
“ဦးသိနျးရှေ ဒီအသကျအရှယျရောကျပွီ။ ဘုရားထီးတငျဖူးလား?”
“တငျဖူးတာပေါ့။ သာပေါငျး-တောငျညိုက ဘုရားထီးတငျတာ ငါပါတာပေါ့”
“အေး ငါက သူမြားနဲ့မတူဘူး။ လူထူး လူဆနျးပဲ။ ရုက်ခစိုးတောငျ ထှကျပွေးတာ။ သိတယျ မဟုတျလား။? တဈခါတလေ ပှဲကွီးပှဲကောငျးဆိုရငျ ဖောကျဖောကျလာတတျတယျ။ ဆရာကွီးတှကေ ရှငျးပေးရတာမြားတော့ ငါ့ကို မလာစခေငျြဘူး”
“ဪ … ဒီလိုလညျး ရှိကွတာလား”
“တဈခါက ငါတို့ရဲ့ဆရာ ဆရာတငျဆိုတာ ရှိတယျ။ ဆရာစုတို့ တပညျ့ လိမ်မာတှနေဲ့ တောငျ ညိုက ဘုရား ထီးတငျဖို့ လုပျကွတယျ။ တောငျညိုက သာပေါငျးမွို့မှာ ရှိတာ။ ပုသိမျက စကျလှနေဲ့ လိုငျး သင်ျဘောနဲ့ တဈနကေုနျ သှားရတာ”
“ဆရာအဖှဲ့တှေ ငါမသိအောငျ မနကျဖွနျ စကျလှနေဲ့ ထီးပငျ့မှာ။ သာပေါငျးတောငျညိုက ထီး တငျပှဲ ငါ့ကိုထားခဲ့မှာ”
“ဟုတျတယျ။ ငါလညျး မနကျစောစော လမျးလြှောကျတော့ စိတျက သီတာဦး သင်ျဘောဆိပျ ကို သှားခငျြနတေယျ။ သီတာဦးသင်ျဘောဆိပျကနေ ဆကျသှားရငျ သာပေါငျးသှားမယျ့ လိုငျးသင်ျဘော အသေးရှိတယျ”
“ငါ့စိတျက ဒီနားလေးကို သှားခငျြနတော။ ကဲ …သှားကှာဆိုပွီး စိတျထငျရာလြှောကျလိုကျ တာ။ သာပေါငျး သင်ျဘောနား ရောကျသှားတယျ ဆိုပါတော့”
“ဆရာ့ကိုယျစောငျ့နတျက သတိပေးတာ ဖွဈမယျ”
“ဟုတျတယျ။ ငါက ရူးပမေယျ့ ဘုနျးက မရူဘူး။ ငါ့အစောငျ့က နှိုးဆျောတာ။ သင်ျဘော ပျေါကွညျ့လိုကျတော့ ထီးကို မွငျရတာ။ ဘုရားက ထီးကွီးပဲ”
“ထူးတော့ထူးတယျ။ ထီးတော့တှပွေီ့ဆိုပွီး ငါ အပွငျကို အကဲခတျလိုကျတော့ ဆရာတငျတို့အဖှဲ့ သင်ျဘောဆီကို လာနတောတှလေို့ကျတယျ”
“ငါလညျး ဘာရမလဲ။ ဒငျးတို့ကို ပညာပေး မယျဆိုပွီး သင်ျဘောပျေါတကျပွီး အိမျသာထဲ ဝငျ ပုနျးနလေိုကျတယျ”
“ကောငျးခနျး ရောကျနပွေီ။ ဆကျပါဦး”
“ဒီလိုနဲ့ ထီးတငျမယျ့ ဆရာအဖှဲ့လညျး စုံ ရော။ သူတို့ပွောတဲ့စကားသံကို ငါကွားနရေတာ ပေါ့။ ခရီးသညျတှေ စုံလို့ သင်ျဘောကွီးလညျး ကမျး က ခှာရော။ ဆရာ့တပညျ့တှေ ဝမျးသာနကွေတာ။ ဒီတဈခါ သိနျးရှေ မပါတော့ဘူး။ ဒီလောကျဆိုရငျ သိနျးရှတေဈယောကျ ထီးတငျပှဲမလိုကျရလို့ ငိုနမှော ပဲ။ သနားပါတယျ ကိုသိနျးရှရေလေို့ တဈယောကျ တဈပေါကျ ပွောနကွေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ငါလညျး အိမျသာထဲက ထှကျလာပွီး ‘ငါ လညျးပါတယျ။ ခနျြမထားနဲ့။ ထီးတငျပှဲ လိုကျခဲ့မယျ’ဆိုပွီး ထှကျလာရော”
“ဟာ ဒုက်ခပဲ။ သိနျးရှကွေီးက ဒီရောကျနတေယျဆိုပွီး ပါးစပျအဟောငျ သားနဲ့ အံ့ဩနကွေတာပေါ့။ သူတို့ဆရာ ကွီးကို သှားပွောကွတာပေါ့။ ဆရာကွီးက မေး တယျ။ မငျးကို ဘယျသူက ပွောတာလဲတဲ့။ ကြှနျတျော့ကို ဘယျသူမှ မပွောပါဘူး။ ဒီနေ့ မနကျကိုယျစောငျ့နတျကနှိုးဆျောလို့ ရောကျ လာတာပါလို့ ပွောလိုကျတာ”
“မငျး ငါ့စကားကို နားထောငျ။ တောငျ ညိုဆိုတာ တောငျပိုငျကွီးက ဆိုးတယျ။ ပေါကျကရ လုပျရငျ ဒုက်ခရောကျသှားနိုငျတယျ။ ထီးတငျပှဲကို အောငျအောငျမွငျမွငျ ဖွဈအောငျတငျခငျြတယျ။ မဖောကျပါနဲ့လို့ ဆုံးမတယျ”
“ဦးသိနျးရှကေလညျး ဖောကျဖောကျနေ တတျတာလား?”
“ငါက အမွဲတမျးကွီးတော့ ဖောကျတာ မဟုတျဘူး။ တဈခါတလေ စိတျထငျရာ လုပျတတျ တော့ မှနျတာ ရှိသလို မှားတဲ့အခါကတြော့ ဖောကျ တာလို့ ပွောကွတာပေါ့ကှာ”
“တောငျညိုမှာ အောငျအောငျမွငျမွငျ ထီး တငျခဲ့တယျ။ မှတျမှတျရရ ငါ့ကို ကှကျပွီးထားခဲ့တာမှ ငါလညျး ပါဖွဈအောငျ ပါခဲ့တာ။ ငါ့ဘဝရဲ့ မှတျ တမျးလေး တဈခုပေါ့ကှာ”
“ဒီမှတျတမျးလေးကိုလညျး မှတျတမျးတငျ ထားပါ့မယျ။ တဈခြိနျကရြငျတော့ အသုံးတညျ့မှာပါ”
“တောငျညိုရောကျတော့ ဦးသိနျးရှကွေီး ဖောကျသေးသလား။? တခွား ထူးဆနျးတာတှေ ဖွဈသေးလား”
“အေး ထူးဆနျးတာတဈခု ဖွဈသေးတယျ ကှ။ ငါ့ကို ဆရာက အနီးကပျ ကွီးကွပျထားတော့ သိပျဖောကျလို့ မရဘူး။ ထီးတငျပှဲတော့ အောငျ အောငျမွငျမွငျ ဖွဈသှားတယျ။ ဆရာလညျး စိတျ လြှော့လိုကျပွီး ငါ့ကို လှတျထားတယျကှာ”
“ဆရာ့တပညျ့ထဲမှာ စိုးသိနျးဆိုတဲ့ ရခိုငျ တဈယောကျ ပါတယျကှ။ သူက ရိုးရိုးအအကွီးပါပဲ။ ငါ့ကို ထီးတငျပှဲ မလာစခေ့ငျြတာ သူက အကဲဆုံးပဲ။ သင်ျဘောပျေါမှာ ငါ မပါလို့ ပြျောနတောလညျး ဒီ ကောငျ့အသံက အကယျြဆုံးဘဲ။ ငါ သူ့ကို ပွနျစခငျြ နောကျခငျြတာတယျ”
“ဟုတျတယျ။ ငါ့စိတျတှကေ ဖောကျလာ တယျ ဆိုပါတော့ကှာ။ ဆရာက ဆရာကတျောနဲ့ စကားပွောနတေယျ။ ငါတို့ ကနျြတဲ့အဖှဲ့ စုမိရာက ငါတို့နှဈယောကျ ထအျောတော့တာပဲ”
“တဈယောကျက တိုငျပေးတယျ။ ငါက လိုကျဆိုတာ။ အတိုငျအဖောကျ လုပျကွတာပေါ့”
“တောငျညိုကို ဘယျသူစောငျ့မလဲ? လို့ တိုငျတာ ငါက ‘တောငျညိုကို စိုးသိမျးစောငျ့မယျ’လို့ ဖောကျလိုကျတယျ။ သုံးကွိမျလညျး အျောပွီးတော့ ဆရာလညျး ရောကျလာတာပေါ့”
“ဆရာက ဆူလိုကျတာ။ ငါ သသေခြောခြာ ပွောထားရကျနဲ့ မဖောကျပါနဲ့ဆို၊ ဘာလို့ ပေါကျကရ အောကျရတာလဲလို့ ဆုံးမတာပေါ့။ စိုးသိနျး ရခိုငျ လညျး ငိုပွီး ဆရာ့ကို တိုငျပွောတာပေါ့”
“စိုးသိနျး ငါရှိတယျ။ မငျးဘာမှ မဖွဈစေ ရဘူးဆိုပွီး ဆေးတှေ ဘာတှေ တိုကျလိုကျတယျ။ စိုးသိနျး ရခိုငျလညျး ဘဝငျကသြှားတယျ”
“ငါတို့အဖှဲ့ ပုသိမျကို ပွနျလာကွတယျ။ ရခိုငျစိုးသိနျးလညျး ဘာစိတျကူးပေါကျလဲမသိဘူး။ သာပေါငျးကို သူ့မိတျဆှနေဲ့ ပွနျသှားတယျ။ သာ ပေါငျးမှာ သဈကိစ်စအလုပျလုပျရငျး တောငျညိုနားက မွကှေကျတှေ ဝယျပွီး ယာလုပျနတော ငါးနှဈ လောကျကွာတယျ”
“အျော ဒီလိုတောငျ ဖွဈသှားတာပေါ့”
“ငါလညျး စိုးသိမျးကို သနားလို့ တောငျညို အထိ သှားချေါရတယျ။ သူ့ယာခငျးတှရေောငျးပွီး ပုသိမျကို မနညျးပွနျချေါလာရတာ။ ဝစီဗဒေ ပွော တိုငျးရှတယျဆိုတာ ငါကောငျးကောငျးသိသှားပွီ”
ဤသို့ဖွငျ့ ပုသိမျမွို့တှငျ တာဝနျထမျး ဆောငျခဲ့စဉျက ခငျမငျလေးစားခဲ့ရသော ဦးသိနျးရှေ ကွီး၏ ပွောစကားမြားကို မှတျတမျးတငျဂုဏျပွုရ ပါကွောငျး …။ ။
မဃေဝတီဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ အရဟံအပတျတဈသိနျး ဆငျးရဲငွိမျး ကငျြ့စဉျတျော